Arabia Saodita: Notsamborina Andron’ny Idy Ilay Mpikatroka Reema Al Joresh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2012 23:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, বাংলা, Español, فارسی, Magyar, عربي, English
Nosamborina androany vao maraina [19 Aogositra 2012] ilay mpikatroka Saodiana sady mpisera Twitter, Reema Al Joresh raha teny an-dalana handeha hamonjy moske hankalaza ny andron’ny Eid al-Fitr, andro fety Miozolomana manaraka ny Ramadany. Mpitsikera mafana fo noho ny fisamborana tsy amin’ny antony fanaon’ny minisitry ny Atitany i Al Joresh. Fanampin’izany, efa valo taona izao no nogadraina ny vadiny ary mbola tsy nisy ny fotoam-pitsarana.
Nikasa hizara fanomezana 500 ahitana taratasy izy mba hanaitra ny sain’ny olona mikasika ny fisamborana tsy ara-drariny manjaka ao Arabia Saodita.
Tamin’ny 5:11 maraina ( ora ao Saodita), Al Joresh ni-tweet hoe:
Abdulaziz al-Shihri nisioka hoe:
Mohammad al-Ogaimi nanampy hoe: